အိမ်အကူမိန်းကလေး – Eleven Media Group
ကျောက်တံတားမြို့နယ်တွင် အိမ်အကူမိန်းကလေးကို ၀ိုင်ယာကြိုးဖြင့် ခြေသလုံး၊ ပေါင်နှင့်ကျောကုန်းတို့တွင် ညိုမည်းအောင် ရိုက်နှက်ခဲ့သည့် အိမ်ရှင်အမျိုးသားအား အမှုဖွင့်
Posted on August 9, 2018 August 10, 2018 by ပြည့်ဖြိုးအောင်၊ ကျော်ဇင်ဖြိုး
ရိုက်နှက်ခံရသည့် အိမ်အကူကလေးငယ်၏ ဒဏ်ရာများကို တွေ့ရစဉ်
ကျောက်တံတားမြို့နယ်တွင် အိမ်အကူ မိန်းကလေးကို ၀ိုင်ယာကြိုးဖြင့် ခြေသလုံး၊ ပေါင်နှင့် ကျောကုန်းတို့တွင် ညိုမည်းအောင် ရိုက်နှက်ခဲ့သည့် အိမ်ရှင်အမျိုးသားအား သြဂုတ် ၉ ရက်က ကျောက်တံတားမြို့မရဲစခန်းက အမှုဖွင့်ထားကြောင်း သိရသည်။
သြဂုတ် ၉ ရက်တွင် ကျောက်တံတားမြို့နယ် (၃၈)လမ်းဈေးတွင် အိမ်အကူ မ….(၁၇ နှစ်) က ဈေးလာဝယ်စဉ် ခြေထောက်များ၌ ညိုမည်းဒဏ်ရာများကို ဈေးသည်အမျိုးသမီးကတွေ့၍ မေးမြန်းရာ အိမ်ရှင်က ၀ိုင်ယာကြိုးဖြင့် ရိုက်ထားကြောင်း သိရသဖြင့် မိခင်ထံ ဖုန်းဆက်အကြောင်းကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မ…..(၁၇ နှစ်) ၏ ပြောကြားချက်အရ အိမ်ရှင်အမျိုးသားက သြဂုတ် ၈ ရက်တွင် နေ့လယ်ထမင်းစားပြီး ပန်းကန်ဆေးရာ မပြောင်သည့်အပြင် တံမြက်စည်းလှည်းခိုင်းရာတွင်လည်း မပြောင်၍ ၀ိုင်ယာကြိုးဖြင့် ရိုက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နှိပ်စက်ခဲ့သည့် အိမ်ရှင်မှာ ကျော်စိုးလင်းဆိုသူဖြစ်ပြီး ၎င်းမှာ မက္ကာသို့ ဘုရားဖူး ထွက်သွားကြောင်း သိရသည်။
“ကိုကျော်စိုးလင်းက ဘုရားဖူးသွားမယ်ဆိုတော့ ရက်ပေါင်း ၄၀ လောက်ကြာမယ်။ အဲဒီတော့ ကိုကျော်စိုးလင်းသွားမှာကိုတော့ အိမ်မှာ လူလိုရင် ကျွန်မညီမလေးကို ထားပေးပါ။ မဟုတ်ဘူး၊ ငါ့မှာလူရှိတယ်။ နှစ်ယောက်ရှိတော့ မုန့်လေးဘာလေး ၀ယ်ခိုင်းရတယ်ဆိုတော့ အဲဒါဆိုရင်လည်း ခေါ်လိုက်ဆိုပြီး လက်ခံပေးလိုက်တယ်။ ဒီကောင်မလေးက ဘာမှမတတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ရိုးသားမှုတော့ ရှိတယ်။ ကိုကျော်စိုးလင်းက လုပ်ပြတယ်။ ဆူတယ်ပေါ့။ အဲဒီဖြစ်တဲ့နေ့ကလည်း ကိုကျော်စိုးလင်းကလည်း ဆီးချိုဝေဒနာသည်ဆိုတော့ တစ်ခါတလေကျရင် ဆီးချိုတက်ရင် စိတ်တိုတတ်တယ်။ အဲဒီနေ့မှာ ပြောလို့မရတော့ ဖုန်းအားသွင်းတဲ့ကြိုးကို လိမ်ပြီးတော့ ခြေထောက်ကို ရိုက်လိုက်တာ။ ဒါဖြစ်စဉ်အမှန်ကို ကျွန်တော် ပြောတာပါ” ဟု အိမ်ရှင်၏ကိုယ်စားလှယ် ကိုကျော်လင်းဦးက ပြောကြားသည်။
အိမ်ရှင် ဦးကျော်စိုးလင်းက ခရီးသွားမည့်အချိန်တွင် အိမ်အကူမိန်းကလေးနှစ်ဦးကို မုန့်ဖိုးပေးခဲ့ကြောင်း၊ သြဂုတ် ၉ ရက် နံနက်တွင် အိမ်အကူ မ…. က မုန့်သွားဝယ်ချိန်တွင် ဒလမြို့နယ်တွင် မ….. ၏မိခင်နှင့် အိမ်နီးချင်းနေထိုင်သူ အမျိုးသမီးက တွေ့ရှိ၍ မေးမြန်းပြီးနောက် ပြည်သူများက ကျောက်တံတားမြို့မ ရဲစခန်းသို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်း ကိုကျော်လင်းဦးက ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
ရိုက်နှက်ခံရသည့် အိမ်အကူမိန်းကလေးတွင် ခြေသလုံး ညိုမည်းဒဏ်ရာများ၊ ပေါင်နှစ်ဖက် ညိုမည်းဒဏ်ရာများ၊ ယာဘက်ကျောကုန်း ညိုမည်းဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့သဖြင့် အိမ်ရှင် ဦးကျော်စိုးလင်းအား အရေးယူပေးရန် အိမ်အကူမိန်းကလေး၏ မိခင်က ကျောက်တံတား မြို့မရဲစခန်းသို့ တိုင်တန်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်မှ အိမ်ရှင်ဖြစ်သူ ဦးကျော်စိုးလင်းအား ကျောက်တံတားမြို့မရဲစခန်းက (ပ)၂၁၆/၂၀၁၈၊ ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုဒ်မ ၃၂၅/၃၄၁ ဖြင့် အမှုဖွင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
Posted in NewsTagged အိမ်အကူမိန်းကလေးLeaveaComment on ကျောက်တံတားမြို့နယ်တွင် အိမ်အကူမိန်းကလေးကို ၀ိုင်ယာကြိုးဖြင့် ခြေသလုံး၊ ပေါင်နှင့်ကျောကုန်းတို့တွင် ညိုမည်းအောင် ရိုက်နှက်ခဲ့သည့် အိမ်ရှင်အမျိုးသားအား အမှုဖွင့်
အိမ်အကူ အမျိုးသမီးအား သေဆုံးသည်အထိ နှိပ်စက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည့် ဥပဒေအရာရှိ အမျိုးသမီးအား ရုံးထုတ်ချိန်တွင် မီဒီယာများက ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယို မရိုက်ရန် ၎င်း၏ခင်ပွန်းမှ တရားရုံးသို့ စာတင်ထား
တရားစွဲ ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် ဥပဒေအရာရှိ အမျိုးသမီးအား ယခင်ရုံးချိန်း (ဇူလိုင် ၁၈ ရက်) တွင် ရုံးထုတ်လာစဉ်
အိမ်အကူ အမျိုးသမီးအား သေဆုံးသည်အထိ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည့် ဥပဒေအရာရှိ အမျိုးသမီး ရုံးထုတ်ချိန်တွင် မီဒီယာများမှ ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယို မရိုက်ကူးရန် ၎င်း၏ခင်ပွန်းမှ တောင်ပိုင်းခရိုင် တရားရုံးသို့ စာတင်ထားကြောင်း သိရသည်။
ဇူလိုင် ၂၅ ရက် ရုံးချိန်းတွင် တရားလိုပြ သက်သေအဖြစ် အုတ်ဖိုကျေးရွာ နေထိုင်သူ အမျိုးသားနှစ်ဦးအား စစ်ဆေးခဲ့ပြီး ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် ဥပဒေအရာရှိ အမျိုးသမီးအား ရုံးထုတ်ချိန်တွင် ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယို မရိုက်ကူးရန် တရားရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများက လိုက်လံ တားမြစ်ခဲ့သည်။
“စာတင်ထားတာကတ ရားခံရဲ့ ခင်ပွန်းကနေပြီးတော့ တရားရုံးကို ပို့ထားတာ တစ်စောင်ရှိတယ်။ သတင်းမီဒီယာ ကောင်စီတွေကိုလည်း မိတ္တူတွေ ပေးထားတာ ရှိတယ်။ အဲဒါနဲ့တော့ မဆိုင်ပါဘူး။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ နေရာမှာပဲ ရိုက်ကူးရမယ်။ အမှုစပြီး စွဲတင်တဲ့နေ့ကလည်း ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် ဓာတ်ပုံမရိုက်ဖို့ ဆင်းတားပါသေးတယ်။ တရားရုံးထဲမှာ ရိုက်ခွင့် ကန့်သတ်ထားပါတယ်။ ရိုက်ခွင့်မပေးတာ သူတို့ဘက်က စာတင်တာကြောင့် မဟုတ်ပါဘူး”ဟု ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တောင်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှ သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ဦးမိုးဝေက ဆိုသည်။
ဖမ်းဆီးခံထားရသူ ဥပဒေအရာရှိ အမျိုးသမီး၏ ခင်ပွန်းမှ ၎င်း၏ဇနီးအား ရုံးထုတ်လာချိန်တွင် ဓာတ်ပုံနှင့် ဗီဒီယိုများ မရိုက်ရန် တောင်းဆိုသည့်စာအား ဇူလိုင် ၄ ရက်က တောင်ပိုင်းခရိုင် တရားရုံးသို့ ပို့ထားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“တရားရုံးရဲ့ မူဝါဒဆို အရင်တည်းက ရိုက်ခွင့်ကို အရှေ့ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးနဲ့ အနောက်ပိုင်းခရိုင် တရားရုံးတွေလို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ပိတ်လိုက်ပါ။ အခုဟာက ဥပဒေအရာရှိ အမျိုးသမီးဘက်က စာတင်ပြီးမှ အခုလိုတွေ ရိုက်ခွင့်ကို ပိတ်လိုက်သလို ဖြစ်နေတယ်။ တရားရုံးက မူဝါဒကို မှန်မှန်ကန်ကန် ဖြောင့်ဖြောင့်မတ်မတ် ထားတာ ကောင်းပါတယ်။ အစတုန်းက ရိုက်လို့ရတယ်။ စာတင်ပြီးတော့မှ အခုလိုတွေ တင်းတင်းကျပ်ကျပ် လိုက်တားတွေ လုပ်နေတယ်”ဟု သတင်းထောက် တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
“မီဒီယာတွေကို ရိုက်ခွင့် မပေးတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်မက ခရိုင်တရားသူကြီးနဲ့ တွေ့ပြီးပါပြီ။ ခရိုင်သူကြီးက ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဘက်က ဒီအမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လာသတင်းယူတဲ့ မီဒီယာတွေ ဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယို မရိုက်ဖို့ သတင်းထောက်တွေရဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ရုံးကို စာပို့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒါကတော့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှုံးတယ်လို့ ကျွန်မမြင်ပါတယ်။ ဒီအမှုမှာ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ စစ်နေကြတဲ့အချိန်မှာ အဲဒီလို ကန့်ကွက်စာပေးလို့ မီဒီယာတွေကို ရိုက်ခွင့်မပေးဘူးဆိုရင် တရားရေး မဏ္ဍိုင်ကို အနည်းနဲ့အများ ထိခိုက်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ သူတို့တောင်းဆိုတာက မီဒီယာကျင့်ဝတ်အတိုင်း တောင်းဆိုတာဆိုရင် လက်ခံပါတယ်။ ဒီနေ့ကတော့ ရွာက သက်သေနှစ်ဦးကို စစ်ဆေးပါတယ်။ ရုံးချိန်းကို သြဂုတ် ၂ ရက်ကို ပြန်ချိန်းထားတယ်”ဟု သေဆုံးသူ အိမ်အကူ အမျိုးသမီးဘက်မှ လိုက်ပါ ဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် ရှေ့နေတစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ဥပဒေအရာရှိ အမျိုးသမီးမှာ ရုံးထုတ်လာချိန်တွင် မျက်နှာဖုံးဖြင့် မျက်နှာအား အုပ်ထားခြင်း၊ မိုးကာအကျီ ၀တ်ကာ ခေါင်းစွပ် ဆောင်းထားခြင်းနှင့် ဦးထုပ်ဆောင်းခြင်းများ ပြုလုပ်ထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
သေဆုံးခဲ့သည့် အိမ်အကူ အမျိုးသမီးမှာ တွံတေးမြို့နယ် ခတ္ထိယတိုက်နယ် ခတ္ထိယကျေးရွာအုပ်စု အုတ်ဖိုကျေးရွာနေ မခင်စန္ဒာဦး (ခ) မကရင်မ (၃၈နှစ်) ဖြစ်ပြီး တရားစွဲ ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် ဥပဒေအရာရှိ နေအိမ်တွင် အိမ်အကူအဖြစ် လုပ်ကိုင်နေစဉ် ဆွဲကြိုးခိုးယူသည်ဟု စွပ်စွဲခံရပြီး နှိပ်စက်ခံခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ထားသည်။
Posted in Crime, NewsTagged အိမ်အကူမိန်းကလေးLeaveaComment on အိမ်အကူ အမျိုးသမီးအား သေဆုံးသည်အထိ နှိပ်စက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည့် ဥပဒေအရာရှိ အမျိုးသမီးအား ရုံးထုတ်ချိန်တွင် မီဒီယာများက ဓာတ်ပုံနှင့်ဗီဒီယို မရိုက်ရန် ၎င်း၏ခင်ပွန်းမှ တရားရုံးသို့ စာတင်ထား
တွံတေးမြို့နယ်တွင် အိမ်အကူ အမျိုးသမီးအား ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် သတ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည့် ဥပဒေအရာရှိ အမျိုးသမီးအမှုမှ တရားလိုဖြစ်သူကို စတင်စစ်ဆေး
Posted on July 12, 2018 by သီဟအောင်
အိမ်အကူ အမျိုးသမီးအား ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် သတ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည့် ဥပဒေအရာရှိ အမျိုးသမီးအမှု ရုံးချိန်းကို တွေ့ရစဉ်
တွံတေးမြို့နယ်တွင် အိမ်အကူအမျိုးသမီးအား ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် သတ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည့် ဥပဒေအရာရှိ အမျိုးသမီးအမှုမှ တရားလိုဖြစ်သူ အုတ်ဖိုကျေးရွာမှ ရာအိမ်မှူးအား တောင်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံး၌ ဇူလိုင် ၁၁ ရက်တွင် စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ရုံးချိန်းတွင် တရားလိုဖြစ်သူ အုတ်ဖိုကျေးရွာမှ ရာအိမ်မှူး ဦးအေးသောင်းအား နှစ်ဖက်ရှေ့နေများက ပြန်လှန်မေးခွန်းများ မေးမြန်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“ဒီနေ့ကတော့ တရားလိုဖြစ်တဲ့သူကို စစ်ဆေးပါတယ်။ စစ်ဆေးရာမှာ တရားလိုက ရဲစခန်းမှာ တိုင်ချက်ဖွင့်ထားတာကို တရားရုံးမှာ အကျယ်တ၀င့် ထွက်ဆိုပါတယ်။ သူက သာမန်လူ တစ်ယောက်ဆိုတော့ တစ်ဖက်ရှေ့နေရဲ့ မေးမြန်းချက်တွေကို ဖြေဆိုရာမှာ အခက်အခဲ နည်းနည်းတော့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တရားလိုရဲ့ ထွက်ဆိုချက်တွေကို အားရပါတယ်” ဟု သေဆုံးသူ အိမ်အကူ အမျိုးသမီးဘက်မှ လိုက်ပါ ဆောင်ရွက်ပေးသည့် ရှေ့နေ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
ရုံးချိန်းအား လာမည့် ဇူလိုင် ၁၈ ရက်သို့ ပြန်လည်ချိန်းဆိုခဲ့ပြီး အဆိုပါရုံးချိန်းတွင် တရားလိုပြ သက်သေတစ်ဦးအား စစ်ဆေးမည် ဖြစ်သည်။
ဇူလိုင် ၁၁ ရက် ရုံးချိန်းတွင် ယခင်ရုံးချိန်းကဲ့သို့ ရဲတပ်ဖွဲ့အင်အား အများအပြားဖြင့် ရုံးမထုတ်ခဲ့သော်လည်း ဖမ်းဆီးခံထားရသူ ဥပဒေအရာရှိ အမျိုးသမီးမှာ ၎င်း၏မျက်နှာ မမြင်စေရန် Mask တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ဦးထုပ်ဆောင်းခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ တွံတေးမြို့နယ် ခတ္တိယတိုက်နယ် ခတ္တိယကျေးရွာအုပ်စု အုတ်ဖိုကျေးရွာတွင် နေထိုင်သည့် မကရင်မသည် ပြ်ီးခဲ့သည့် ခြောက်လခန့်က လှည်းကူးမြို့နယ် အင်းတိုင်ရှိ နေအိမ်တစ်အိမ်တွင် အိမ်အကူအဖြစ် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ထို့နောက် ၂၀၁၈ ခုနှစ် မေ ၁၉ ရက် နေ့လယ်ပိုင်းတွင် မကရင်မ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် နေအိမ်မှ အိမ်ရှင် အမျိုးသမီးဖြစ်သည့် ဥပဒေအရာရှိမှာ မကရင်မနှင့်အတူ အုတ်ဖိုကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိလာပြီး အိမ်နီးချင်းများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ရာအိမ်မှူးများကို ခေါ်ပြီး အိမ်အကူအမျိုးသမီးမှာ နေမကောင်းခြင်းကြောင့် ပြန်ပို့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုပြီး လူနာကို ကောင်းမွန်စွာ လက်ခံရရှိကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးစေခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းနောက် အိမ်ရှင်အမျိုးသမီး ပြန်သွားသည့်အချိန်တွင် အိမ်နီးချင်းများက မကရင်မ၏ ရောဂါအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းရာ အဆိုပါ အိမ်ပိုင်ရှင် ဥပဒေ အရာရှိအမျိုးသမီးက ဆွဲကြိုးခိုးသည်ဟု စွပ်စွဲပြောဆိုပြီး ခြေထောက်ဖြင့် ကန်ခြင်း၊ ကျောက်ပျဉ်ဖြင့် ထုခြင်းတို့ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး လည်ပင်းနှင့် နောက်ကျောတို့တွင် ဒဏ်ရာများ ရရှိကာ ၎င်းအား ဆေးရုံပို့ပေးရန် အိမ်နီးချင်းများကို ပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက် ဆေးရုံသို့ပို့ ဆောင်ရန် ပြင်ဆင်စဉ် သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ တွံတေးမြို့နယ် ခလောက်ချိုက်နယ်မြေရဲစခန်းက ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၀၂ ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း သိရသည်။
Posted in Crime, NewsTagged အိမ်အကူမိန်းကလေးLeaveaComment on တွံတေးမြို့နယ်တွင် အိမ်အကူ အမျိုးသမီးအား ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် သတ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည့် ဥပဒေအရာရှိ အမျိုးသမီးအမှုမှ တရားလိုဖြစ်သူကို စတင်စစ်ဆေး
ပုသိမ်မြို့တွင် အိမ်အကူမိန်းကလေးကို ဆဲဆိုရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခဲ့သည်ဟုဆိုသူ သုံးဦးအား ပုဒ်မခြောက်ခုဖြင့် အမှုဖွင့်
Posted on June 29, 2018 June 30, 2018 by နီလာစိုး (ပုသိမ်)
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ပုသိမ်မြို့ အမှတ် (၆) ရပ်ကွက် တကောင်းဘုရားလမ်းရှိ Design King အထည်ဆိုင်တွင် လာရောက်လုပ်ကိုင်သည့်အိမ်အကူ မိန်းကလေးနော် ဘွေဒီးဝါးကို ဆဲဆိုရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခဲ့သည်ဆိုသူ ပိုင်ရှင်ဦးထက်လင်းသော် အပါအ၀င်သုံးဦးအား ဇွန် ၂၈ ရက်က ပုသိမ်မြို့နယ်မြေရဲစခန်းတွင် လာရောက်အမှုဖွင့်တိုင်ကြားခဲ့သောကြောင့် ပုဒ်မခြောက်ခုဖြင့် အမှုဖွင့် အရေးယူထားကြောင်း ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ သိရသည်။
ရေကြည်မြို့နယ် ဓာတ်တော်ကုန်းကျေးရွာနေထိုင်သူ နော်ဘွေဒီးဝါးမှာ လွန်ခဲ့သည့် သုံးနှစ်ခန့်မှ စတင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ အထည်ဆိုင်ပိုင်ရှင် ဦးထက်လင်းသော်နှင့် ဇနီးဖြစ်သူ မဇင်မင်းသူတို့က ဆဲဆိုရိုက်နှက်ခြင်း၊ ခါးပတ်နှင့်ရိုက်ခြင်း၊ မီးပူနှင့်ဒဏ်ရာရ အောင်လုပ်ခြင်းအပါအ၀င် ဆိုင်လုပ်သားဖြစ်သူ အောင်အောင်ကလည်း ထိုးကြိတ်ခဲ့ကြောင်း တိုင်ကြားလာသဖြင့် ၎င်းတို့သုံးဦးအား ပုသိမ်မြို့ နယ်မြေရဲစခန်းတွင် အမှုအမှတ် ၂၉၇/၂၀၁၈ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၅၄၊ ၃၂၄၊ ၃၂၃၊ ၂၉၄၊ ၅၀၀/၁၁၄ တို့ဖြင့် အမှုဖွင့် အရေးယူထားကြောင်း၊ ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး လူကုန်တားဥပဒေဖြင့် ငြိစွန်းခြင်း ရှိမရှိကိုလည်း စစ်ဆေးလျက်ရှိကြောင်း၊ စစ်ဆေးပြီးတွေ့ရှိပါက ဆက်လက်အရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ ဒုတိယရဲမှူးကြီး ခင်မောင်လတ်ထံမှ သိရသည်။
“လက်ရှိဒဏ်ရာတွေတော့ရှိပါတယ်။ ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဆေးစာတွေပို့ထားပြီး ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းတွေကို စိစစ်နေပါတယ်။ စိစစ်ပြီးတော့မှ တွေ့ရှိချက်အတိုင်း ငြိစွန်းတဲ့ပုဒ်မနဲ့ထပ်ပြီး အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာပါ” ဟု ဒုတိယရဲမှူးကြီးခင်မောင်လတ်က ဆက်လက်ပြောကြားသည်။
လက်ရှိတွင် အိမ်အကူမိန်းကလေးအား နှိပ်စက်ခဲ့သည်ဆိုသူသုံးဦးအား အာမခံဖြင့် ထားရှိပြီး စစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်များအတိုင်း ဆက်လက်အရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Posted in NewsTagged အိမ်အကူမိန်းကလေးLeaveaComment on ပုသိမ်မြို့တွင် အိမ်အကူမိန်းကလေးကို ဆဲဆိုရိုက်နှက်နှိပ်စက်ခဲ့သည်ဟုဆိုသူ သုံးဦးအား ပုဒ်မခြောက်ခုဖြင့် အမှုဖွင့်